San Htun's Diary: ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၈
ဒါပေမယ့် လမ်းတွေ ကောင်းဖို့ ၊ အခြေခံလိုအပ်ချက် ရေမီး ပြည့်စုံဖို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ့် အစိုးရကို အခွန်ဆောင်ရတာ ကျေနပ်တယ်။ ဆိုတဲ့ စကား
ပြေစေဖို့ လုပ်ပေးတာဆိုရင် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးအခွန်
အခွန်စနစ်တွေကတော့ တစ်နိုင်ငံ တစ်မျိုးထင်ပါရဲ့။ အမျိုးမျိုးပါဘဲ။
လီဗိုနိုတော့ သိပ်မကြိုက်သလိုဘဲ။ ဒီဘက်က လူအတော်များများက မက်ခ်ဘွတ်ခ် သုံးကြတာ များတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်ကတော့ Sony Vaio 17' သုံးနေတယ်။ ကွန်ပျူတာတော့ ပျက်လို့ မဖြစ်ဖူး စန်းထွန်းရေ။ သူမရှိရင် အိမ်ထောင်ပျက် တစ်ခုလပ်/မုဆိုးဖိုလို နေမထိ ထိုင်မသာနဲ့ အတော်လေး အထီးကျန်မှာ။း)
အန်းဒရူးက လီနိုဗိုယောဂ၊ ရာမားက မတ်ဘွတ်၊ ဆူနမ်က သိဘူး နင်လိုချင်တာ ဝယ်တယ့်။
I prefer Dell.. and my co-worker like Toshiba. :p
တို့များ ရွှေပြည်ကြီးများ သက်သာပါ့...ဘာအခွန်မှလည်း ဟုတ်ဟုတ်ငြားငြား မတောင်းရှာဘူး...အင်း...ဘာတစ်ခုမှလည်း ပြန်မရဘူး...တန်ပါ့ ဘဲစားဘဲချေ...း)
လီနိုဗိုတော့ မသုံးဖူးဘူး...BenQနုတ်ဘွတ်လေး လှတာနဲ့ ၀ယ်သုံးလိုက်မိပါ့ ကီးပက်စပယ်ယာမလာလို့ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရပါရောလားး)လက်ဆောင်ပေးမယ့်လူရှိရင်တော့ Mac book air လေး တောင်းရင်ကောင်းမလား စိတ်ကူးတယ်း)
အခွန်အကြောင်းလေးတွေသိရလို့ ကျေးဇူးပါ ။
အခွန်ဆောင်ရတာများရင်မကြိုက်ဘူး... ပွဲခတွေလို ၂ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဘဲဆောင်ချင်တယ်...
US ရောက်တာမကြာသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းမက အခွန်ဆောင်ရလွန်းလို့ ညည်းရှာတယ်။ ကွန်ပျူတာတော့ မရှိလို့မဖြစ်ဖူးနော်.. သူကအရေးကြီးတယ်.. :)
သူငယ်ချင်းတွေ အနားရှိနေတော့ မျှဝေခံစားလို့ရသေးတော့ တော်သေးပါရဲ့နော်..